ကျီးကန်းက ကြက်ဥမကြိုက်ဘူ . ကြက်ဥကို အမြဲတမ်း ခွေးကို ပေးတယ် ခွေးက အစပိုင်း ကျေးဇူးတင်တယ်
ကျီးကန်းက ကြက်ဥမကြိုက်ဘူ . ကြက်ဥကို အမြဲတမ်း ခွေးကို ပေးတယ် ခွေးက အစပိုင်း ကျေးဇူးတင်တယ် ကျီးကန်းက ကြက်ဥမကြိုက်ဘူး၊ ကြက်ဥကို အမြဲတမ်း ခွေးကို ပေးတယ်။ခွေးက အစပိုင်း ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့၊ ကြာတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်။အကျင့်ဖြစ်လာတော့ ဒါက သူ့ကိုပေးကိုပေးရမလိုဆိုတဲ့ စိတ် ဖြစ်လာတယ်။ တနေ့ကျတော့ […]
အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့၊ အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကို အဆင်ပြေချောမွေစေမယ့် ၂၄ပစ္စည်း ပဌာန်း
အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကို အဆင်ပြေချောမွေစေမယ့် ၂၄ပစ္စည်း ပဌာန်း မိတ်ဆွေတို့မှာ လူမှုရေး စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေး တို့မှာ အခက်အခဲတွေ၊ အတားအဆီးတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေ ရှိနေပါသလား။ အခုပြောမယ့် နည်းလေးကို သေချာဖတ်ပီး လုပ်ကြည့်ပါဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တွေ့မို့လို့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ […]
ခဈြစရာကောငျးလို့ လူမှုကှနျရကျမှာ နာမညျအရမျးကွီးနတေဲ့ မွနျမာကြောငျးဆရာမလေး (ရုပျသံဖိုငျ)
ခဈြစရာကောငျးလို့ လူမှုကှနျရကျမှာ နာမညျအရမျးကွီးနတေဲ့ မွနျမာကြောငျးဆရာမလေး (ရုပျသံဖိုငျ) ဒီရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ အွန်လိုင်းမှာ လူကြီးများနေတဲ့ ပေါ်ပြူလာဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဆို တစ်တော့ ဆော့ထားတဲ့ ချစ်စရာဆရာမလေးဖြစ်နေတာကိုးဗျ။ ဘယ်ဘ၀က ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်မသိ လှလိုက်တာဆရာမလေးရယ်။ လှတဲ့သူတွေကြတော့လည်း ရီလည်းလှ ငိုလည်းလှ၊ ပြုံးလည်းလှ မဲ့လည်းလှ။ မလှတဲ့သူကြတော့လည်း ဘယ်လိုလုပ်လို့မှ မလှ။ […]
အိုငျဒေါဒိုငျသုံးယောကျနဲ့ ကွိုးကိုငျသူတှကေို တညျ့တညျ့ကွီးဝုနျးလိုကျတဲ့ ပွညျစိုးအောငျ
အိုငျဒေါဒိုငျသုံးယောကျနဲ့ ကွိုးကိုငျသူတှကေို တညျ့တညျ့ကွီးဝုနျးလိုကျတဲ့ ပွညျစိုးအောငျ ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မနေ့ညက အိုင်ဒေါရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို တနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတော်တော်မျာများက ပေါက်ကွဲခဲ့ကြပါတယ် ။ အမှားအနည်းဆုံး အကောင်းဆုံး သီဆိုပြနိုင်ခဲ့တဲ့ တန်ခွန်ကျော်နဲ့မူးလာတို့ ကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် ပွဲဆူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စအပေါ် နိုင်ငံကျော် ဒီဇိုင်နာကြီး ပြည်စိုးအောင်ကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကဆင့် […]
မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုကြောင့်​ အက်စတာကို ပွင့်ပွင့်လင်း ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုကြောင့်​ အက်စတာကို ပွင့်ပွင့်လင်း ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဒီတပတ် Myanmar Idol Season4ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရတာကတော့ မူးလာနဲ့ တန်ခွန်ကျော် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော် အက်စတာ ကတော့ နောက်ဆုံး ၃ ယောက်အဆင့် (Top 3) […]
လူဝံကြီးရဲ့ လှောင်အိမ်ထဲက်ို ကလေးလေး ကျသွားသောအခါ (ရုပ်သံ)
လူဝံကြီးရဲ့ လှောင်အိမ်ထဲက်ို ကလေးလေး ကျသွားသောအခါ (ရုပ်သံ) ထိုပြုတ်ကျသွားတဲ့ ၄နှစ်သား ကလေးငယ်လေးဟာ လူဝံကြီးကို ကြောက်ရွံနေခဲ့ပြီး လူအုပ်ကြီးကလည်း ကလေးငယ် အန္တရာယ်ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူဝံကြီးဟာ ကလေးငယ်ကို ဘာအန္တရာယ်မှ မပြုခဲ့ပါဘူး။သူဟာ ကလေးငယ်ကို လှောင်အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကို ခေါ်သွားခဲ့ပြီးနောက် မကြာခင်မှာ ကလေးငယ်ကို လှောင်အိမ်ထဲကနေ […]
”အဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနကို ကျောခိုင်းခြင်း” မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်ချက်
”အဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနကို ကျောခိုင်းခြင်း” မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်ချက် နိုင်ငံခြားမှ ဒေါက်တာဘွဲ့ယူကာ ပြည်ပမှာပင် လစာမြင့်မားသည့် သင်ကြားရေးရာထူးကို စွန့်လွှတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာကာ တက္ကသိုလ်တစ်ခု၌ သရုပ်ပြရာထူးဖြင့် သုံးနှစ်ခန့် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ဆရာမတစ်ဦးက အဆင့်မြင့်ပညာရေး လောကကို သူမည်သို့ စိတ်ပျက်ကာ စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပုံကို ပေးစာအဖြစ် ရေးသားထားသည်။ အယ်ဒီတာရှင့် […]
အွန်လိုင်းမှာ ဂယက်ထနေတဲ့ စောက်တောသားလို့ ပြောဆိုLiveလွှင့်ခဲ့သူကို မွန်းလေး ဒဲ့ဝုန်းပီ
အွန်လိုင်းမှာ ဂယက်ထနေတဲ့ စောက်တောသားလို့ ပြောဆိုLiveလွှင့်ခဲ့သူကို မွန်းလေး ဒဲ့ဝုန်းပီ ဒီဗွီယိုဖိုင်ဟာဆိုရင်တော့ ပီခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စတင်ပျံ့နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပီး ဝေဖန်မှုတွေလည်း မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ အဖက်ဖက်က နိမ့်ကျနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အခုလို တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ကြတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်တွေ အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ် ချစ်ခင်ရိုင်းပင်းကြမှ သာယာတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်သလို […]